Banyere Anyị - Shandong Surmount Hats Co., Ltd.
Companylọ ọrụ anyị kachasị emepụta okpu ịwụ, okpu ugwu, okpu baseball, okpu ndị agha na okpu, okpu egwuregwu, okpu ejiji, visors na okpu mgbasa ozi. Anyị nwere ike ịnakwere iwu OEM dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. N'ihi na otutu aghụghọ, fashionable ekwekọghị, elu rụọ na elu àgwà ngwaọrụ, anyị na-ewu ewu na ahịa. A na-ebupụ ha na Korea, Japan, Europe na United States, wee nweta nkwupụta dị mma site na ọtụtụ ndị ọrụ.
Anyị na-esi ọnwụ na enterprise tiori nke "Ahịa bụ Chineke, Ogo bụ Ndụ", n'ihe banyere "Surmount Oneself; Superchụ Super-Excellence" dị ka mmụọ mmụọ mmụọ, na-ekwe nkwa ogo nke mbụ, ma mepụta ọkwa mbụ. Ọ bụ ihe ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ anyị chọrọ ka ndị ahịa nwee afọ ojuju.
The ụlọ ọrụ ji ezi obi na-enwe mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ na gị
Aghọ a okpu emeputa na soplaya
Pursuchụso mma, ịsụ ụzọ na otutu, nchịkọta nkekọrịta, ahịa mbụ, mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ.
Nkà ihe omuma ahia
Iguzosi ike n'ezi ihe, nkwanye ùgwù na ọkachamara, ndị ahịa na-eme ihe ziri ezi mgbe niile.
Omume bu ihe mbu na njikere inye. Omiiko, raara onwe ya nye na ịdị n'otu.
Omenala ndị isi
Nsonaazụ bụ isi, ihe kpatara ya bụ nke abụọ.
Kpachara anya ma mara ihe.
Ọrụ ọ bụla nwere atụmatụ.
Atụmatụ ọ bụla nwere nsonaazụ.
Ihe ọ bụla rụpụtara bụ ọrụ.
A ghaghị inyocha ọrụ ọ bụla.
Nyocha ọ bụla nwere ụgwọ ọrụ na ntaramahụhụ.
Dịka onye nrụpụta ọkachamara, anyị agafeela asambodo sistemụ ISO9001，Nchọpụta WRAP na ikike ikike ụlọ ọrụ nke Bureau Veritas nyere, nke bụ onye ndu ụwa na nyocha na ọrụ asambodo.